सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थी सहुलियत कायम गराउन स्ववियुको पहल ! – ebaglung.com
सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थी सहुलियत कायम गराउन स्ववियुको पहल !
२०७३ चैत्र ११, शुक्रबार ०४:४०	थप समाचार
केशव बि.क.मुस्ताङ २०७३ चैत ११ । सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थी सहुलियत कायम गराउँन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) जनहित बहुमुखी क्याम्पस जोमसोमले पहल गरेको छ । सरकारको नियमानुसार सार्वजनिक यातायातका साधनहरुमा विद्यार्थीले सहुलियत दरमा यात्रा गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको हो ।
नेपाल सरकारको नियम अनुसार विद्यार्थी परिचय पत्रको आधारमा सार्वजनिक यातायातका साधनहरुको भाडादरमा विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट व्यवस्था गर्न सम्बन्धीत निकाय संग पहल गरिएको जनहित बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु सभापति रविन बानियाँले बताए ।
सभापति बानियाँले भने, हामीले स्ववियु निर्वाचनको समयमा विद्यार्थीलाई विद्यार्थी परिचय पत्रको आधारमा यातायातमा सहुलियतको व्यवस्था मिलाउने अपिल पनि गरेका थियौँ । हाम्रा एजेण्डाहरुलाई मनपराएर विद्यार्थी साथीहरुले स्ववियु निर्वाचनमा ओरास्ववियुको प्यानललाई अत्याधिक बहुमतका साथ विजयी गराउँनु भयो । अब हामी हाम्रा एजेण्डाहरु कार्यान्वयनको चरणमा छौँ, क्रमैसंग कार्यान्वयन गराउँदै जान्छौँ ।
बानियाँका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत विभिन्न यातायात व्यवसायी समितिलाई नेपाल सरकारको नियमानुसार परिचय पत्रको आधारमा विद्यार्थी सहुलियतको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।
विद्यार्थीलाई म्याद कायम रहेको विद्यार्थी परिचय पत्रको आधारमा सरकारको नियमानुसार विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने अधिकारलाई आफ्नो नियम नं. १० मा सुनिश्चित गरिएको धौलागिरी अंचल यातायात बस व्यवसायी संचालक समिति जोमसोम शाखाकी निरिक्षक सुन्देवी रसाईलीले बताईन् ।